Resaky ny mpitsimpona akotry : fahefana mitsitaitaika | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fahefana mitsitaitaika
Tsy ela akory izay no nitrangan’ny tetika hanemorana any amin’ny 2019 ny fifidianana filohan’ny Repoblika izay efa voafaritra hatao amin’ny faran’ny 2018. Izao indray misy indray fikononkononana mikasika ny fandrosoana io fe-potoana io. Tsy adino koa ilay fitakin’ny mpanohitra anaovana izany izao dia izao. Fa heverin-drizalahy kilalao ve ny fitantanana ny raharaham-pirenena ka na mbola vinavina fotsiny aza dia afaka ho sangisangiana toy izany ny fetra apetraky ny lalàna ? Izany rehetra izany, na ny avy ao andaniny na ny avy ao ankilany, dia fomba famiravirana ny vahoaka izay atao fanilihana fotsiny ny filazana azy fa fikarohana na fiarovana ny tombontsoany no maniraka amin’ny fanaovana izany, no mbola fahanan-dainga amin’ny fitaka fanosora-menaka azy ho loharano sady tompom-pahefana amin’ny alalan’i masindahy sady masimbavy Demôkrasia.
Misy dikany inona moa izany masina indray andro nefa atao an’efitra toy ny voagadra mandritra ny dimy taona ? Tsy mahefa na inona na inona fa mitazam-potsiny ny fanjakazakan’ireo nomeny tso-drano hanatanteraka andraikitra hikaroka tombotsoa ho an’ny rehetra nefa hatry ny ela tsy mbola namokatra ny nifanekena fa lany andro fotsiny amin’ny kabary fandrebirebena mba hanakonana ny fanjakan’ny fitiavan-tena izay hany mifehy eo amin’ny kianja filalaovana pôlitika lasa itrangan’ny adilahy tsy misy fitsaharana.
Voalaza moa fa ny manan-tsira mahay mahandro. Eo
amin’io tontolo voalaza io dia ny fitaka sy lainga no sira. Ny profesora amin’ny taranjan’ny fitaka sy ny dokoteran’ny famafazan-dainga no matetika voahosotra ho mpandresy. Tsy ny fahazoana ny vato alatsaky ny mpifidy fotsiny no ifaninan’izy ireo fa mbola mifampitady koa ry zalahy eo amin’ny fanodikondinana ny vokatry ny safidim-bahoaka. Raha tsy izany ve dia hifampiahiahy toy ireny mialoha ny fikatsoana ary mifanendrikendrika tsy misy farany rehefa mivoaka ny valim-pifidianana. Tsy vitan’ny hoe mitsitapitapy isaky ny dimy taona ny fanomezana fahefan’ny vahoaka, fa tsy manana ny hasina akory noho ny fikarohan’ny mpilalao pôlitika ny fomba maloto isan-karazany ahafahany manodikodina ny didim-bahoaka.
Lasa lavitra izany fanao izany. Tonga saina ny mponina, raha very hasina ny didy apetraky ny vahoaka, sedran’izany tsy omeny lanja ny didim-panjakana ary tsy asiany sira ny didim-pitsarana. Eto amin’ny fiarahamonina samy manao ny lalànany samy mitsaratsara amoron-dàlana. Any an-tatatra no mivarina ny demokrasia.